Kubatana - Archive - Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions - Week 1 - Shona - Kubatana.net - May 2010
Minister of Constitutional Affairs, Advocate Eric T Matinenga, answers your questions about the Constitution making process in Zimbabwe - Week 1 - Shona
View week one questions and answers in Ndebele here
1. Bumbiro remitemo remuZimbabwe rinoitei? bumbiro iri rakasiyana papi nemamwe anowanikwa mumisangano yakaita sema "youth group"?
Kana tiri kutaura nezvebumbiro remitemo, tiri kutaura nezve mutemo mukuru pane mimwe mitemo yose munyika. Nekuda kwekuti ndiwo mukuru, munhu wese akafanira kuti agoutevera. Mumwe mutemo usingapindirane nemutemo mukuru uyu hauna chaunoshanda. Saka munoona kuti mutemo uyu zvaunofanirwa kuteverwa nemunhu wese, mutemo we"organisation" unosunga vanhu ve "organisation" iyoyo chete.
Ndinoona kuti mubvunzo uyu wabva kwaMutare, Semuenzaniso ngatitorei chikwata chinoimba chekuSakubva. Zvinoreva kuti chikwata ichocho chinogona kuva nebumbiro remitemo yacho inoteverwa nevanhu vechikwata ichocho. Ini ndinogara kuHarare, handisi mumwe wechikwata ichi, saka handisungwe nebumbiro remitemo yechikwata ichi. Asi hazvinei kuti uri kuchikwata chekuimba ichi kana kuti ndiVaMatinenga vari muHarare, kana bedzi uri mugari wemuZimbabwe, tose tinosungwa nebumbiro remitemo yeZimbabwe.
2. Nhasi mubvunzo wedu uri kubva kuna Kudzie, ari kubvunza kuti iko kugadzirwa kwebumbiro kuchatora nguva yakareba zvakadini, uye sei zviri kunonoka?
Vanhu vanenge vatoneta vachiti hapana kwatiri kusvika. Ragai ndikutarirei kuti, kubva patakatanga munaKurume 2009, pane nhanho dzatafamba dzinoratidza kuti tiri kuenderera mberi nebumbiro. Nhano yekutanga ndeye kuti pachibvumirano cheGPA kwakatenderanwa kuti pabumbiro panofanirwa kuita "Select Committee" yevanhu vari muParliament, izvozvo takaita.
Tabva ipapo takava nemusangano wekutanga wainzi "Stakeholders' meeting", musangano iwowo wakaita kuti tizive kuti vanhu vari kuda chii panyaya yekuti kana tava kuenda ku "outreach programme" yatichataura tinenge tichiziva kuti tinenge tichinotsvaga chii. Tabva izvozvo takaita kuti ivo vanhu vari kuenda kunevanhu vafundiswe kuti kana vari kuenda kune vanhu vanenge vachitaura chii.
Tabva ipapo takada kufundisazve vanyori, vanonyora kuti patanga tiri pamusangano wakati, vanhu vataura kuti kudii. Vanhu ava tava navo, vakafundiswa, saka iye zvino tava kuenda kunobvunza vanhu, chinova ndicho chikamu chinokoshesesa chekuvaka bumbiro remitemo nekuti kana tichienda kune vanhu, imi vanhu, ndimi munototaura kuti munoda chii mubumbiro remitemo iri. Bumbiro remitemo harisi raVaMugabe, raVaTsvangirai kana kuti raVaMutambara, bumbiro nderenyu imi vanhu.
Saka kuti vanhu vataure zvavanoda vakasununguka, takati hapana anofanirwa kuve akabata rimwe ngwaro ringaite se "Kariba draft, Lancaster house agreement", kana ripi zvaro. Saka mapato ose akabvumirana mibvunzo ichabvunwa vanhu. Mibvunzo iyi inenge ichienderana nema"theme" akabva pa "fist stakeholders" conference. Saka vanhu ngavasatya zvavo kuti ndakaenda kumisangano iyi ndinganzi bvuma Kariba draft, kwete hazvisi zveKariba, takabvumirana kuti muchanobvunzwa mibvunzo yekuti muchanobvunzwa kuti munoda chii. Pane nyaya yema "Citizenship rights", pane nyaya yema "bill or rights' panenyaya yelocal government, pane nyaya ye "devolution" saka zvese izvi muchange muchibvunzwa kuti muzvitaure pamuchazoita misangano.
Mari ikozvino yavapo, nekudaro vanhu vachasangana musi wa10 Chivabvu kuti vagadzirise mibvunzo iyoyi. Saka tinokarira kuti kupera kwaChivabvu tinenge tava kupinda mu "outreach programme" kana tapedza programme iyoyo tinenge tava kupinda pakunonyora bumbiro remitemo. Richanyorwa zvichienderana nezvakataurwa nevanhu. Tabva ipapo tichaenda kunonzi ku "second stakeholders' conference" tabva ipapo toenda ku "Referendum". Tinokarira kuti zvose izvi zvichazopera tava nebumbiro chairo rabvumwa nevanhu vose muna Kubvumbi, gore rinouya.
3. Mubvunzo wanhasi wabva kuna Philebon, ari kubvunza kuti, ko Kariba Draft ine bara rei pakunyorwa kwebumbiro remitemo.
Vanhu havafanire kutya. Takabvumirana kuti vanhu vachabvunzwa mibvunzo zvichibva pamaTalking Points. Ma "talking points" aya akabvumiranwa nemapato matatu ari muhurumende. Uye vanhu havasi kuzonamatirana nema "talking points" chete. Pakasununguka kuti vanhu vaunzewo zvinhu zvitsva zvavanoda. Naizvozvo hapana munhu achauya ne Kariba draft, kana rimwe draft zvaro kunze kwema "talking points" andataura. Ndiri kuti vanhu ngavasununguke pavanouya kumisangano iyi varege kutya, asi vanzwe kuti vari kuita chikamu chavo pakunyorwa kwebumbiro.
4. Isu vekuMatebeleland nekuMidlands ticharamba kutsigira bumbiro iri kana risina "devolution of power", Nyaya ye "devolution of power" yakamira sei?
Kana tichiti kuzvitonga munyika hazvireve kuti Midlands inenge yava nekahurumende kayo yega, kana kuti Manicaland yave nekahurumende kayo yega kwete. Kana tichiti kuzvitonga kuri mumaruwa, tinenge tichiti dai maruwa, akawanawo kuzvitonga kune tsarukano. Kana tichiti kuzvitonga kune tsarukano tinenge tichiti kana takati pane maGovernor vatinoti ma "Resident Ministers" vari kusarudzwa nani, vari kusarudzwa nevanhu here kana kuti vari kusarudzwa nemunhu mumwe chete. Kana tichiti kune Makanzuru, kana tichiti kune maLocal Authoirities, ma "local authorities" nemakanzuru aya ndeye vanhu zvechokwadi here. Saka kana tichiti tinoda kuti simba revanhu riende kumaruwa, hatisi kuti simba riende kuvanhu vari mumaruwa ari kuMatebeleland chete kwete, tiri kuti simba ngarienge kumaruwa kune vanhu vese vemuZimbabwe. Ndinoziva kuti hapana munhu asingade kuti kuve nesimba chairo rinonyatsoonekera rinoenda kumaruwa, saka ndinoti zvatinofanira kuti tiite ndezvekuti, zvisineyi nekuti uri wekuProvince ipi, kana vanhu vauya kunobvunza, enda kwavari unonyatsotsanangura kuti kana tichiti masimba ngaaende kuvanhu, toita kuti simba riende kuvanhu sei? Kana muri kuda kuti musarudze mega governor wenyu, endai munotaura kudaro, kana muchida kuti hamudi kuti kanzuru ingotongwa neimwe nzira naMinister wacho, endai munotaura kudaro, ndizvo zvinoita kuti tigoti masimba edu tamaisa kuvanhu nemazvo.
5. Nhasi mubvuzvo wedu wabva kuna vanaMalile, Marlene, Peter naCicely, vari kuda kunzwa kuti bumbiro idzva richati kudii nezve "citizenship"?
Kana tikati chizvarwa tinoona kuti pane munhu akaberekerwa muno asi vabereki vake vari vekuAmerika, munhu iyeye haasi wemuno. Kana tichiti chizvarwa tinotarisa munhu aberekerwa munyika imomo anekonzero (maRights) dzemuno, kazhinji tinoti munhu wese azvarwa munyika imomo, anekodzero dzekuti nyika ino ndeyangu. Tozoonazve kuti pane vamwe vanotaura chokwadi kuti vari nyika yechizvarwa asi ozoti muna 2008 akaenda kuma "elections," abva anonzi hauvhoti iye oshaya kuti zvinofamba sei. Anobva anzi hauvhote nekuti sekuru vako vakabva kuMozambique kana kuMalawi, kwaasingatozive iye munhu wacho. Saka vanhu ivavo vanoita sevasiri kubatwa zvakana munyika yavaberekerwa, asi ivo vasina imwe nyika yavanoziva, Zimbabwe iri iyo yoga yavanoziva. Toonazve kuti dzimwe hama dzedu dzakaenda kunze kwenyika, dzinodawozve konzero dzakaita sekuti vavhote. Saka tionei kuti toita sei kuti vanhu vose vakagodzera vagove nekudada nenyika yavo yeZimbabwe.